Zvese Zvevatengesi Vanofanira Kuziva nezve Discount uye Coupon Strategies | Martech Zone
Wow - nekukurumidza pandakaona iyi infographic kubva VoucherCloud, inotungamira voucher yeUK uye saiti yekutapudza, ndaiziva kuti ndaifanira kuigovana! Iyo infographic ndeyekutarisa kwakazara pazvitoro zvekutengesa, nzira dzevavhoti, makadhi ekuvimbika uye coupon kushambadzira akanyanya maitiro evatengesi. Iyo inopa chimiro chemushandisi wemaponi, matipi uye manomano ekugadzirisa ako makwikwi, uye toni yemienzaniso kubva kune vanotungamira vatengesi.
Chandinonyanya kufarira chirevo ichi (chakapepetwa zvishoma):
Mabhizimusi mazhinji anotadza kuzadzikisa mabhenefiti emakoponi nekupa kukwidziridzwa kunoisa pundutso pabasa ravo, kutadza kushambadzira bhizinesi ravo uye kubvisa kukosha kwezvigadzirwa zvavo nekuda kwemishandirapamwe inowanzoitika zvichiteedzana nekukurumidza kana nekupa kudzikisira kwakanyanya kwemitengo. Vamwe vanokundikana kusimudzira mushandirapamwe wavo zvakakwana uye vangangotumira imwe yekuvandudza kuburikidza nemagariro enhau kuitira kuti vatengese kusimudzira kwavo, uyezve bhizinesi ravo uye vanotarisira mhedzisiro.
Isu takaona makuponi achiita mushe pakuunza vashanyi vatsva kuzvitoro zvekutengesa, asi isu takaona zvakare kudzikisira kwakadzika kuchideredza masevhisi akapihwa uko mutengi asingazive kukosha kwechigadzirwa kana sevhisi yavari kutenga. Kuderedzwa kwakanaka kunofanirwa kufungidzirwa kuitira kuti ikunde bhizinesi nyowani uye kuchengetedza bhizinesi!
Tags: 241Accessoriesmapoka emazeranguvozvakanakisisa zviitoblockbusterbogofmhando mabhenefitikutengesa bhizinesitenga imwe tora imwe maharacoupon zvinobatsiracoupon yakanakisa maitirocoupon pesvedzerocoupon redemptioncoupon tricksmhando dzekuponivashandisi vekuponicouponer profileCouponscheka makuponidiscount pointskukanganisaelectronicsemail coupon kusimudzirakekutanga mutengikekutanga mutengi kupihwakutakurirwa maharafree trialyemahara muedzo kupihwachipo nekutenganhoroondo yemaponiinowedzerainternet couponsmakadhi akavimbikaMcDonald raMwariorenjianonongedza zvirongwaQR Makodhizvikonzerozvitoro zvekutengesaKugonesa Kugonesaanoratidzasocial media couponschitambi muunganidzwastampsmaviri kune rimwemaviri pamutengo wevatatumakodhi evavhoti
Ndira 10, 2016 na9: 22 PM
Akanaka kwazvo infographics. Tinoda kugovana izvi kune vashandisi vedu (nezvikwereti kwauri).
Gumiguru 3, 2016 na4: 04 PM
Kuverenga kukuru uye ruzivo! Ini ndaingoda kuziva kana iwe uine chinongedzo kana unogona kugovana saiti iyo inopa runyorwa rwemibvunzo kana yekutarisa ndisati ndasarudza coupon yekujekesa imba? Ini ndiri mutsva kuchinhu ichi uye ndinoda matipi kubva pakubata kusvika pakupera.